Xiddigaha Ingiriiska Oo Ammaan Kala daalay Messi Iyo Milner Oo Ay Dhulka La Dhaceen
HomeChampions LeagueXiddigaha Ingiriiska Oo Ammaan Kala daalay Messi Iyo Milner Oo Ay Dhulka La Dhaceen
Warbaahinta dalka Ingiriiska ayaan u kala hadhin ka hadalka mucjisadii ay Manchester City kala kulantay kooxda Barcelona, markaas oo si dadku ka yaabeen uu ugu dul galgashay Lionel Messi.
Lionel Messi ayaa dariiq ka samaystay labada lugood ee James Milner dhexdooda kaas oo inta uu kubadda ku ritay si fiican u dhaafay halka uu Milner dhulka ku dhacay. Waxay ahayd markii labaad ee uu sidaas oo kale Messi kubadda dhex mariyo labada lugood ee ciyaartooyada City, waxa uga horreeyey Fernandinho oo isaguna ku ceeboobay garoonka dhexdiisa markii ay isku-daba mareen Messi iyo Neymar oo labaduba waddo ka dhex samaystay labadiisa lugood dhexdooda.
Gary Neville oo ciyaarta xalay ahaa falanqeeye ciyaareed oo ka hadlayay telefishinka Sky Sports ayaa kubadda Messi ka dhex saaray lugaha Milner waxa uu ku sheegay tii ugu quruxda badnayd ee uu waligii arko.
Gary Lineker ayaa isaguna ku tilmaamay Messi ciyaartoygii ugu wanaagsanaa ee waligii kubadda cagta ciyaara, waxaanu bartiisa Twitter ku qoray sidan: “Kee baa wanaagsan Messi iyo Cristiano Ronaldo. Messi muran la’aan waa ciyaartoygii ugu wanaagsanaa ee waligii xidha kubaha kubadda cagta. Xattaa ha isku deyina in aad muran gelisaan arrintaas.”
Laacibka Manchester United ee Ashley Young, ayaa isaguna bartiisa ku qoray: “Messi WOW”.
Xiddiga Charlie Austin ee u ciyaara QPR ayaa isna boggiisa soo dhigay: “Jawaabta Pep ayaa wax walba inoogu filan”.
Difaacyahanka Liverpool ee Jose Enrique, ayaa isaguna waxa uu Twitterka ku qoray sidan: “Haddii uu Messi kalidii la ciyaari lahaa City wuu ka guuleysan lahaa. Waa mucjiso. Wuxuu noqon karayaa ninka adduunka ugu wanaagsan marka uu doono.”
Gool-hayaha kooxda Stoke City, Jack Butland ayaa isaguna qoray hadal ku dhow ka Garry Neville iyo Ruud Gullit, waxaanu yidhi: “Yaa Allah, Messi caan ayuu ka dhigay Milner.”
Weeraryahanka ndre Schurrle oo dhawaan u wareegay Wolfsburg isagoo ka tegay Chelsea, ayaa waxa uu isna yidhi: “mar labaad, mar kale, mar kale…”.
Adrian Jackpot Lewis ayaa isna soo qoray: “Messi wuxuu kubadda ka saari karaa cid kasta.”
Ruud Gullit, ayaa isaguna soo qoray: “Yaa Allah, Messi caan ayuu ka dhigay Milner.”
Johan Cruyff Oo Sheegay In Uu Ku Sigtay Ku Biiridda Real Madrid
Ac Milan Oo Sanadka Cusubi Guuldarro Ugu Bilowday
Arsenal Oo War Farxad Leh Ka Heshay Arda Turan